Posted by Tranquillus | Jul 6, 2021 | Shabakada
Dib u soo kabashada ka dib markii aad lumisay shaqadaada marna ma fududa, xirfadle iyo sidoo kale aragti shaqsiyeed. Haddii ay dhacdo joojinta dhaqaale, shirkadaha leh in ka badan 1 shaqaale ah waa inay bixiyaan fasax dib u dejin. Laakiin sidee uga faa'iideysan kartaa xilligan kala-guurka ah? Halkan waxaan ku siineynaa xoogaa furayaal ah shirkadda Olivier Brevet, agaasimaha Oasys Mobilité.
Intii u dhaxeysay 1-da Maarso, 2020-ka iyo 24-ka Maajo, 2021-ka, oo ku dhex jirta dhibaato caafimaad, Waaxda Animation ee Cilmi-baarista, Daraasaadka iyo Tirakoobka (Dares) ayaa lagu diiwaan geliyay Faransiiska 1 PSE (qorshayaasha lagu ilaalinayo shaqada). Iyadoo, shirkadaha ay ka shaqeeyaan in ka badan 041 shaqaale ah, waajibaadka saaran in la siiyo fasax dib-u-dejin ah haddii ay dhacdo shaqo-dhimis lagu sameeyo shaqaalaha ay khusayso.
« Fasaxa shaqaalaynta ayaa soo rogaya uguyaraan marka la eego mudada (4 bilood) iyo magdhowga (65% celcelis ahaan magdhowga laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay), wuxuu sharxayaa Olivier Brevet, agaasimaha Oasys Mobilité, oo ah shirkad taageerta shaqaalaha ka hor inta uusan ka tagin shirkadda (macluumaadka, taageerada go'aanka, milicsiga) iyo ka dib bixitaankooda ee hirgelinta la taaban karo ee mashruucooda. (shaqada, tababarka, abuurista ganacsiga, tirtiridda xuquuqda hawlgabka, iwm.). Kadib, gorgortanku wuxuu dhacayaa labadaba marka la eego muddada
Sidee dib loogu soo kabsadaa inta lagu jiro fasaxa dib-u-dejinta? Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
horeBarashada Fogaanta: bartayaasha qaaciddada isku dhafan ayaa ka adkaaday
socdaWax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qorista istiraatiijiyadda shaqada
Adeegga dadweynaha: kordhinta mushaharka ugu yar ee heerka Smic ee Janaayo 1
Horumari sirdoonkaaga dhaqammadaada
Badweynta Wadnaha Aadanaha
HAGAHA MUHIIMKA AH EE AQOONSIGA [XEER LA'AAN]